Wadankee Yurub ugu fudud in laga qaato dhalashada? | Somaliska
Sanadkii 2014 ayaa guud ahaan wadamada midowga yurub (EU) waxay dhalasho siiyeen ajaanib gaaraysa 890,000 qof, iyadoo wadanka Spain uu noqday kan ugu gacanta furan dhinaca dhalasho bixinta. Iyadoo ay soo raacaan Italy, UK iyo Germany. Dadka ugu badan ee baasaboorka ka qaatay EU-da ayaa ka soo jeeda Morocco, Albania iyo Turkey.
Wadanka Spain ayaa baasaboorka siiyay dad gaaraya 205 900 qof, halka Italy oo kaalinta labaad gashay ay siisay dad gaaraya 129 900 qof. Dadka ugu badan ee Spain ay sharciga siisay ayaa ka soo jeeda Morocco. Soomaalida ayaa sharciyada ugu badan ka helay wadamada Sweden, UK iyo Holland.
niiga jooga italy 15 sano marka possaporka italy ciyaarta laguma helo taasi aniiga ayaah ka diiday marka waxaa war ka heyni dadka loma shergo somaliska jamcale sxb runta dadka isootabi
maanshaa Allah Somali dii horumar bay gaadhay waa wax Laguna fawning
sxb ali hadii aad 15 sano joogto maxaa dhacay ma shaqo aa laysku xujeeyaa mise waxaan maqlay in qofkii 15 sano joogo bilaa shuruud aa laysku siyaa baasaboorka yurub mise waa italy waa ka gooni mise waa 20 sano bilaa shuruud sxb ali
Mayee waa 35 sano bilaa shuruud
Italy iyo german-ba sharci weyn ma bixiyaan ninka warkan qoray wuxuu ka wadaa midhaa sharciga yar ee Travel documents ka ah.,!!!
Wadanka aduunka ugu fudud in lagu qaato passporka weyn 24 saac gudahiisa yaa sheegi karo?
Italy madhibto anaa hooray 10 sano xataa mahaweysankaro warka iskafiri
Kkkkkkkkkkkkk somalia oo ceer laga bilaway sifud u taajir